Ukuxhaswa kwamahlathi e-Afrika, isilinganiso esisebenzayo sokulwa nokuguquka kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Uma sifuna ukumisa noma okungenani singabhebhethekisi ukuguquka kwesimo sezulu, enye yezinto okufanele siyenze yekani ukugawula izihlahla. Lezi zitshalo zimunca inani elikhulu lesikhutha (CO2), okungenye yamagesi abamba ukushisa abaluleke kakhulu. Kepha leso kungaba yisixazululo esingenakufezeka, ikakhulukazi uma kubhekwa ukuthi abantu, noma ngabe bahlala kuphi, imvamisa bafuna ukuguquka babe nezimo zokuphila ezingcono.
Yize kunjalo, ucwaningo olwenziwe e-Afrika lwashicilelwa ephephabhukwini i-Science, lukuvezile lokho Ukunikeza abalimi abancane izizumbulu zemali kungasiza ekulweni nokuguquka kwesimo sezulu.
Emazweni amaningi asathuthuka, njenge-Uganda (i-Afrika), ukunciphisa ubuphofu nemizamo yokonga imvelo kuyahambisana, kepha kwesinye isikhathi ukuthatha izinyathelo ezidingekayo akulula. Ama-70% amahlathi ase-Uganda asezweni elizimele, iningi lawo eliphethwe ngabanikazi abampofu okuthi, ukuze baphile, bavame ukugawula izihlahla ukuze benze ezolimo.
Ngalesi sizathu, uSeema Jayachandran, isazi sezomnotho eNyakatho-ntshonalanga Yunivesithi, noJoost de Laat, uchwepheshe weDutch NGO Porticus, bahlangane ne-US NGO Ukuqanjwa Kwesenzo Sobuphofu ukwenza isivivinyo esasine- banikela ngama-US $ 28 (cishe ama-euro angama-24) ngonyaka ngehektha ngalinye lehlathi ezigodini ezingama-60 zase-Uganda ngombandela owodwa: ukuthi bangaliqedi ihlathi iminyaka emibili. Kungabonakala njengemali encane kakhulu, kepha kufanele ukhumbule ukuthi umhlaba wakhona ushibhile kakhulu.
Imiphumela yayikhuthaza. Ngemuva kweminyaka emibili, emadolobhaneni angazange angene kulolu hlelo, izihlahla eziyi-9% zase zigundiwe, kodwa kulezo ezazithole izikhuthazo, kube ngaphansi kuka-4 no-5% ngaphansi. Ngamanye amagama, baqhubeka nokugawula amahlathi, kodwa kakhulu.
Lokhu kulingana Amathani ayi-3.000 we-CO2 ngaphansi ezikhishelwe emkhathini, okuyinto ethakazelisa impela. Ngokusho kuka-Annie Duflo, umqondisi we-NGO Innovations for Poverty Action, lesi silingo sizosebenza ekulweni nokuguquka kwesimo sezulu, ngenkathi sivikela izindawo zokuhlala ezisongelayo nokusiza abalimi abancane.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ukuxhaswa kwehlathi ngamahlathi e-Afrika, isilinganiso esisebenzayo sokulwa nokuguquka kwesimo sezulu